Fiahiana ara-tsosialy : fametrahana ny « Toseke Vonje Aigne » tao amin'ny distrikan'i Bekily | Primature
Lapan’i Mahazoarivo, ny 05 oktobra 2021 – Ho tohin’ny asa fanarenana ny fahatarana misy any amin’ny Faritra Androy sy ny Faritra Anosy, izay efa natomboky ny Filohan’ny Repoblikan’i Madagasikara, dia nanatanteraka hetsika fiahiana ara-tsosialy tamin’ny alalan’ny « Toseke Vonje Aigne », tao amin’ny distrikan’i Bekily, Faritra Androy, ary teo ambany fitarihin’ny Praiminisitra Ntsay Christian, ny governemanta, ho fanohanana sy fanampiana ny mponina nohon’ny fahasahiranany.
Nambaran’ny Praiminisitra fa « laharam-pahamehana amin’ny fitondram-panjakana ny fampandrosoana ny tapany Atsimon’ny Nosy iny… Manana zo hitovy amin’ny Faritra rehetra eto Madagasikara ny aty Androy, ary manana zo hitovy amin’ny distrika 119 manerana ny Nosy ny distrikan’i Bekily ».
Fanohanana vonjy maika ihany ny tohana ara-tsosialy natao, ary tokantrano maherin’ny 30.000 no hisitraka izany ao amin’ity distrika ity. Niantso fiaraha-mientana amin’ireo tompon’andraikitra isan-tsokajiny eny ifotony ny Lehiben’ny governemanta ho fanatrarana ny vinam-pampandrosoana napetraka.
Maro ireo fotodrafitrasa efa tanterahina amin’izao fotoana izao, ary hapetraka ho vahaolana maharitra sy lovain-jafy. Isan’izany ny fanamboaran-dalana, izay miantoka ny fivezivezen’ny vokatra sy ny vahoaka, eo ihany koa ny fananganana sekoly sy hopitaly satria ny fampianarana sy ny fahasalamana dia antoka lehibe hivoahana amin’ny fahantrana ary lalana iray hamolavolàna ny taraka ho lasa olom-banona. Nanome toky ny Praiminisitra fa hojerena manokana izay asa mbola tsy vita satria tena fantatry ny fitondram-panjakàna ny marary amin’ny vahoaka, ary notsiahiviny tao anaty fanazavàna ny lalan-tsaina itarihan’ny Filoham-pirenena hanatanterahana an’izany rehetra izany, dia ny fifampitokisana sy ny firaisan-tsaina.
Horaisin’ny fitondram-panjakàna an-tanana ihany koa, hoy ny Praiminisitra, ny resaka tsy fanjarian-tsakafo sy ny tsy fahampian-drano ary ny fampivoarana ny fambolena, ka efa mijery ny paikady hitondrana vahaolana maharitra amin’izany ny eo anivon’ny governemanta; ary tsy ho ela dia hapetraka ao Bekily ny toby fanarenana ara-tsakafo sy ara-pahasalamana (Centre de Réhabilitation Nutritionnelle et Médicale – CRNM).
Teo ampamaranana ny lahateniny dia nanome toromarika hentitra ho an’ireo tompon’andraikitra any an-toerana ny Praiminisitra, mba ho tonga any amin’ireo vahoaka tokony hisitraka sy tena mila azy izao fanampiana izao, ary nanolotra fisaorana ho an’ny vahoaka rehetra tamin’ny fandraisana ny fitondram-panjakàna nandritra ny fitsidihana rehetra tany amin’ny Faritra.
← Andro iraisam-pirenena ho an’ny zokiolona
Conseil du gouvernement du Mercredi 06 Octobre 2021 →